Sanadkii Taggay wixii madaxweyne biixi laga fileyay iyo wixii uu Qabsoomay W/Q Nimcaan cadaani – somalilandtoday.com
Sanadkii Taggay wixii madaxweyne biixi laga fileyay iyo wixii uu Qabsoomay W/Q Nimcaan cadaani
Mudadii sandka ku sinayad ee uu majarah hayay hogaamiye muse biixi waxa uu Qabsoomay iyo Anfaaciga lag fileyay waxay isku noqdeen laba ka fog.
Waxynu xusi Doona in muse cugtay xubno wasiiro oo aan khibrad lagu majirto lahaynin taaso suurto gall ka dhigtay in rejadii laga qabay ay hoos uu dhacaday. Tusaale ahaan waxa laga fileyay in muse xakameeyo arrimo dhowr ah .
Hawgu horeyso xakameynta sixir bararka xadhagah goostay ee Naafayeey Laf dhabrtii ama Ilahii dhaqan dhaqale ee shucuubta Somaliland hadii aynu dul istaagano waxa ka qabashad arintaas
Waxay marar badan muuse iyo kaaliyayaashisu uu xadhko xidheen arinka sicir bararka iyagoo
siyaasado cadd ka qaatay hadday tahay baniga dhexe ee Somaliland iyo cida kasta oo ay khuseyso.
Balse ilaa hadda halkii la rabay muu gaadhin.
Arinta qebyaalda oo iyan koru u kaca laxaad leh ku yimid taaso dhaliisheeda ay leeyihiin hogaanka ummada, sameysanka jabahdo iyo dagaal ogaayaal ka dhashay deegamo Somaliland taaso oo ay udub dhexaad uga dhigeen cadaalad darro ayy ka tirsanayaan hogaanka ummada.
Jajab iyo Qeybsan xagg ciidanka Qaranka ah oo loo nisbeynayo in tirsasho iyo tabashoyin xagg hogaanku ay jirto.
Siyaasda arimah dibad Somaliland oo fur-fur ku yimid hadab waxa la tilmaami karaa inuu meeqamkii iyo jihadii siyaayda arimah dibad lafteeda debacsani ku timo taaso Farmaajo kaga awood roonaday hogaamiye muse biixi .
Iyadoo la odhan karro safaradii itoobiya ay madax weynashii is xigxigay ee Somaliland ku tagi jireen ay iyan hoos uu dhac la taaban karro ku yimid iyadoo loo nisbeyn karro debeysha siyaasdeed ee Geeska Africa ka jirta ee uu hormuudka ka yahay reysal wassarah itoobiya.
waxaan ku soo afmeeray Qoraalkaygan tallo ku socta madaxweyne biixi taas oo odhanysa waxa aad haystaa wakhti aad mar labaad ku kasban karto Quluubta shacbiga Somaliland taas oo ku suurto geliysaa inaad wakhti xaadirkan ka tagato mahadhooyin ku gall diwanka Qaranka ee dahabiga ah
Dooro garrbo ama Adeegayaal togan oo ay ka reebantahay Qabeyaalad iyo dhalinyarnimo si aad yoolkaga uu gaadho xullo xeel dheeryaal aan farta laguugu fiiqin.
Afeef : Qoraalkaygan kooban ee maskxdaydu curisay isla markaan aan
jeclaystay inaan bulshoweynta ugu iftiinsho xaiiqoyinka ka dahsoon
ee bulshdu tebbayso